Banaanbax Maalintii Labaad Ay Muqdisho Ka Dhigeen Waalidiinta Ay Caruurtooda Ka Maqan Yihiin – Great Banaadir
Waalidiin ayaa Maalintii Labaad waxey Banaanbaxyo ka dhigeen Qeybo badan oo kamid ah Magaalada Muqdisho, iyagoo ku dalbanayay in caruurtooda dib loogu soo celiyo.
Waxey Waalidiinta siteen Boorar ay ku qoran yihiin Halku-dhigyo ay ku muujinayeen Dareenkooda, si hee loogu soo celiyo Caruurtooda oo ay sheegeen in hee ay maqleen, in laga qeyb-galiyay Dagaaladii ka dhacay Gobolka Tigreega ee Dalka Itoobiya.
Banaanbaxayaasha oo isugu jiray Rag iyo Haween, ayaa waxey la hadleen Warbaahinta, waxeyna u sheegeen in Dowladda Soomaaliya ay uga baahan yihiin in Caruurtooda ay Nolol ama Geeri ay ugu keenaan.
Banaanbaxa ay Waalidiintan dhigayaan ayaa wuxuu kusoo aadayaa, iyadoo Dhawaantan ay Qaramida Midowday si rasmi u shaacisay Cadeymo muujinaya in Dagaaladii Itoobiya ee Gobolka Tigreega ay Ka-qeyb galeen Dhalinyaro Soomaali; taasina ay sii kicisay Welwelka Waalidiinta oo Caruurtooda ay Dowladda Soomaaliya ay Tababar ugu qaaday Dalka Ereteriya ah.
Inkastoo, Qaramida Midowday ay si rasmi ah u shaacisay Cadeymaha muujinaya in Dagaaladii Itoobiya ee Gobolka Tigreega ay Ka-qeyb galeen Dhalinyaro Soomaali ah, haddane Dowladda Soomaaliya waa ay beenisay, waxeyna sheegtay in Dhalinyaradaasi ay weli ku maqan yihiin Tababarkii loo diray.
Saraakiil Ciidan Oo Gaaray Jowhar